बलात्कारीलाइ कुन देशमा कस्तो सजाय दिइन्छ , थाहा छ ? – samyantra.com
बलात्कारीलाइ कुन देशमा कस्तो सजाय दिइन्छ , थाहा छ ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ०७, २०७५ समय: १३:३५:५६
बलात्कारका घटना बढेसँगै मृत्युडण्डको कडा कानुन बनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ । मृत्युडण्डको प्राबधान ठिक कि बेठिक भन्नेबारे सर्बत्र बहस चलिरहेको पनि छ । जान्नोस् बलात्कारीलाइ विश्वका कुन मुलुकमा कस्तो सजाय दिने कानुनी प्राबधान छ –
बलात्कारीलाइ कडा सजाय दिने मुलुकहरु
भारत – भारतमा ‘रेयरेस्ट अफ द रेयर’ घटनामा मात्र फाँसीको सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। साना बालिका बलात्कारका घटनामा पोक्सो एक्टअन्तर्गत दर्ता मुद्दा दर्ता गरिन्छ । यो कानुनमा बच्चा बलात्कारमा दोषी ठहरिए १० वर्षदेखि आजीवन कैद सजायसम्मको प्रावधान छ।
यद्यपि मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाण सरकारले आफ्नो आफ्नो राज्यमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका बलात्कारको मामिलामा फाँसीको सजाय दिने विधेयक तयार गरी कानुन बन्ने क्रममा छ ।
दिल्लीमा यसैप्रकारको कानुन पारित गर्नका लागि दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्षले दबाब दिइरहेकी छिन् । उनले बलात्कारीलाई ६ महिनाभित्र फाँसी दिनुपर्ने माग गरिरहेकी छन्।
केन्द्रीय महिला एवं विकास मन्त्रालयले पनि मध्यप्रदेश, राजस्थान र हरियाणाको नयाँ विधेयकप्रति चासो राख्दै राष्ट्रियस्तरमा पोक्सो एक्टमा परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ ।
मलेसिया – मलेसियामा बालिकाका साथ हुने यौन हिंसाका लागि सबैभन्दा बढी ३० वर्ष जेल सजाय र कोर्रा हान्ने सजायको प्रावधान छ।
सिंगापुर – सिंगापुरमा १४ वर्षकी बालिकाका साथ बलात्कारमा संलग्न अपराधीलाई २० वर्ष जेल, कोर्रा हान्ने र जरिवाना गर्ने सजायको प्रावधान छ ।
अमेरिका – अमेरिकामा बालबालिकाका साथ बलात्कारमा संलग्नकालागि पहिला मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान थियो । तर कैनेडी बनाल लुइसियाना मामिलामा मृत्युदण्डको सजायलाई असंवैधानिक घोषित गरियो । अदालतको भनाइ थियो कि जुन घटनामा मृत्यु भएन, त्यस्तो अपराधमा मृत्युदण्ड दिनु उचित छैन, अर्थात सजाय अपराधभन्दा बढी छ । त्यसैले अब ती राज्यहरुमा मृत्युदण्डको सजाय छैन ।
यद्यपि अमेरिकामा बालिकाका साथ बलात्कारको घटनामा राज्यअनुसार प्रावधान पनि अलगअलग छ ।
जहाँ मृत्युदण्ड छैन
फिलिपिन्स – जुन देशमा मृत्युदण्डको सजाय छैन, त्यहाँ बालिकाका साथ बलात्कारको घटनामा सबैभन्दा कडा कानुन फिलिपिन्समा छ। फिलिपिन्समा बालबालिकाका साथ बलात्कार गरेको सावित भए दोषीलाई विनै कुनै छुट ४० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ।
अस्ट्रेलिया – अस्ट्रेलियामा बालिका बलात्कार गर्नेलाई १५ देखि २५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
क्यानडा – क्यानडामा बालिकाका साथ बलात्कारमा अधिकतम १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
इंग्ल्याण्ड र वेल्स – इंग्ल्याण्ड र वेल्समा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारमा ६ वर्षदेखि १९ वर्षसम्म जेल सजायसहित आजीवन काराबासको सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
जर्मनी – जर्मनीमा बच्चाका साथ बलात्कारपछि मृत्यु भए जन्मकैदको सजाय हुने प्रावधान छ। तर मात्र बलात्कारका लागि १० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुन सक्दछ ।
दक्षिण अफ्रिका – दक्षिण अफ्रिकामा बलात्कारको घटनामा दोषी पाइए पहिलोपटक १५ वर्ष जेल सजायको प्रावधान छ। दोस्रो पटक पनि दोषी पाइए २० वर्ष जेल सजाय र तेस्रो पटक पनि दोषी ठहरिए २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था छ।
न्युजिल्याण्ड – न्युजिल्याण्डमा यसप्रकारको अपराधमा यो सजाय २० वर्षसम्म रहेको छ ।
बलात्कारीलाइ फाँसी दिने मुलुक – एमनेस्टी इन्टरनेशनलको एक रिपोर्टअनुसार संसारमा मात्र ८ मुलुकहरु चीन, नाइजेरिया, कंगो, पाकिस्तान, इरान, साउदी अरेबिया र सुडानमा बाल अपराधीका लागि पनि फाँसीको सजायको प्रावधान छ । – बीबीसीको सहयोगमा